Ungazazi kanjani izinsuku ezicashunwe? Thola ukuthi usebenze iminyaka emingaki | Ezezimali Zomnotho
USusana Maria Urbano Mateos | | Umsebenzi, Izinhlelo zempesheni
Ukuze wazi i iminyaka yeminikelo yokuphepha komphakathi, okuthile okubalulekile ukwazi ukuthi intengo iyini nokuthi ihamba kanjani kuyo yomuntu ngamunye ikakhulukazi. Ngaphambi kokuqala ukwazi ukuthi yini i- impesheni enikela ukuthi kufanele ithinte umuntu ngamunye, kufanele wazi ukuthi ubuncane bokukwazi ukufaka leyo mpesheni iminyaka eyi-15; okungukuthi, umuntu kufanele okungenani abe Iminyaka eyi-15 yokuphila kwakhe inikela ngenkuthalo ekuvikelekeni komphakathi.
Kufanele futhi okungenani ube neminyaka emibili kwengu-15 eyedlule ebhalwe eminyakeni ngaphambi kwesikhathi sika cela umhlalaphansi. Kumele futhi sicabangele iphesenti le- isisekelo sokulawula esinayo kuya ngonyaka esikuwo. Lokhu kusekelwe enanini leminyaka yeminikelo.
Kuze kube ngu-2019, inani eliphansi leminyaka Okufanele kubalwe iminyaka engama-35 nezinyanga eziyisithupha
Okwe-2020 kuze kube ngu-2022 kulinganiselwa ukuthi inani leminyaka yeminikelo lizoba ngama-36
Okwe-2023 kuze kube ngu-2026, inani leminyaka yiminyaka engama-36 nezinyanga eziyisithupha
Ngo-2027, inani leminyaka lizoba yiminyaka engama-37
Okusho ukuthi, njengoba iminyaka ihamba, isibalo seminyaka yeminikelo ezokwazi ukuthola u-100% wempesheni sizoqhubeka nokukhula.
1 Sinezinsuku ezingaki ezicashuniwe?
2 Ungazazi kanjani izinsuku ezinikele ekuVikelekeni Komphakathi
2.1 Izincomo zokucela iminyaka zinikele Ekuvikelekeni Komphakathi
3 Ngaphezu kweminyaka yokunikela, kubalulekile futhi ukwazi enye imininingwane
4 Uma kwenzeka noma iyiphi idatha ingalungile, yini okufanele ngiyenze?
5 Ungazazi kanjani izinsuku ezicashuniwe zokucela izinzuzo
6 Ingabe ikhona imisebenzi engabhalisiwe?
7 Ukubaluleka kombiko wempilo yomsebenzi
8 Ngifunde kanjani impilo yami yomsebenzi ukwazi izinsuku ezicashuniwe
Sinezinsuku ezingaki ezicashuniwe?
Yebo, eminyakeni embalwa eyedlule i-BBVA yenze ucwaningo lapho umkhakha omkhulu wabantu wabuzwa ukuthi ngabe bayazi ngempela ukuthi bangaki efakwe ohlwini lwezokuphepha komphakathi futhi ibiyini imali ecishe ifane abazobiza ngayo uma kwenzeka cela umhlalaphansi.
Iningi labantu lithe lazi kahle ukuthi ibiyini inombolo yeminyaka ebabalileKodwa-ke, uma kukhulunywa ngokwazi ukuthi bazokhokhelwa nini, cishe akekho owaziyo ukuthi uzophendula kanjani ukuthi bazothola malini. Ngaphandle kwalokho, bekukhona isibalo esikhulu sabantu umnikelo wabo ubungaphansi kweminyaka eyi-15; noma ngabe iminyaka yabantu yayinkulu kuneminyaka engama-41.
Ungazazi kanjani izinsuku ezinikele ekuVikelekeni Komphakathi
Zazi izinsuku esizicaphune Kubalulekile ukwazi ukuthi kufanele sicaphune malini, kufanele kubhekelwe lokho ukuphepha komphakathi kuthumela njalo ngenyanga yonke imininingwane evuselelwa njengomkhankaso wokusiza abasebenzi.
Ngaphezu kwalolu khetho, unokunye okuningi njengamandla thumela isicelo nge-inthanethi, ungasithumela kanjani isicelo kwezokuphepha komphakathi ngeplatifomu. Ukuze wenze lokhu, kufanele ngena emsamo bese ucela umbiko wakho wempilo yomsebenzi lapho iminyaka yeminikelo izovela khona.
Kuzofanele ubeke ifayela lakho le- ulwazi lomuntu siqu njengegama lakho nesibongo nenombolo yakho yobulungu, kanye ne-imeyili nenombolo kamazisi.
Ngezansi nje, kuzofanele ubeke yonke imininingwane ephathelene nekheli lakho bese, kufanele uchofoze ukwamukela.
Ngaleso sikhathi, imininingwane izothunyelwa ukuze ukwazi ukucela impilo yakho yomsebenzi.
Izincomo zokucela iminyaka zinikele Ekuvikelekeni Komphakathi
Kufanele ugcwalise zonke izinkambu ezimakwe nge-asterisk, njengoba kudingeka.
Uma kwenzeka kuyindlela yomphakathi futhi ungenayo, kufanele ubeke u-0
Kufanele ufake yonke idatha ngaphakathi kwesicelo ngaphandle kokugqamisa. Akunandaba ukuthi unepelomagama elifanele
Ku Uhlobo lwe-ID, inombolo kamazisi kufanele ifakwe nezinhlamvu; noma kunjalo, akudingekile ukufaka ama-hyphens noma izikhala lapho uyibeka.
Inketho yesibili ukuyicela ngenombolo yocingo ozoyithola ekhasini lezokuphepha: 901 106570. Ngokucela umbiko lapha, uzofika ngqo ekhaya lakho okuyincwadi.
Uma unesitifiketi sedijithali, ungasilanda ku-inthanethi nge-PDF. Lokhu kulanda kungenziwa ngokushesha futhi kufanele kugcwaliswe imininingwane ethile kuphela.
Ekugcineni, kungenziwa ukulanda idatha nge-inthanethi ngemuva kokuphepha komphakathi kusinika ukufinyelela kwimininingwane yethu nge-password nge-SMS. Lolu hlobo lwenqubo nalo luyashesha, kepha, ukuze kuqedelwe zonke izinyathelo, umgcinimafa jikelele kufanele abe nenombolo yakho yocingo ebuyekeziwe.
Ngaphezu kweminyaka yokunikela, kubalulekile futhi ukwazi enye imininingwane
Njengoba sishilo ekuqaleni, ngaphezu kokwazi inani lezinsuku esibe negalelo ngazo, kubaluleke kakhulu ukuthi sazi nolunye ulwazi ukuze sikwazi ukufinyelela kumhlalaphansi wethu ngesikhathi esilinganisiwe. Le mininingwane ayisebenzi nje kuphela ukuze sikwazi ukuthi sithini umhlalaphansi esinawo, kepha ukuze sazi uma kwenzeka singaqashwa, singakanani inzuzo esingaba nayo inyanga nenyanga.
Uma kwenzeka noma iyiphi idatha ingalungile, yini okufanele ngiyenze?
Uma kwenzeka ubona ukuthi noma iyiphi idatha esekhasini lezokuphepha komphakathi ayilungile, isinyathelo esilandelayo ukuguqula leyo datha kusuka kuphrofayela yakho. Kodwa-ke, kuzoba ukuphepha kwezenhlalo ukuthi ngemuva kokubona ukulungiswa kwakho, kunquma ukuthi luhlobo lolwazi olulungile noma cha.
Ungazazi kanjani izinsuku ezicashuniwe zokucela izinzuzo
Ngokungafani nokuthatha umhlalaphansi, ngoba ukwazi ukucela ukungasebenzi kumele bala izinsuku ezicashuniwe futhi kufanele okungenani ube nezinsuku ezingama-360 zeminikelo.
Uma kwenzeka ungakwazanga ukufinyelela kuleli nani, ongakucela usizo oluncane lwe "Ukulahlekelwa kukaJobe”Kepha kulokhu, ukuphepha komphakathi akuphoqelekile ukukunikeza.
Ngalolu sizo lwesibili, kufanele ube neminikelo okungenani izinsuku ezingama-90 uma kwenzeka unomndeni oncikile noma izinsuku ezingama-180 uma kwenzeka ungenayo.
Ingabe ikhona imisebenzi engabhalisiwe?
Yebo, kuneminye imisebenzi lapho ingekho ohlwini ngakho-ke ayikwazanga ukuthola usizo. Le misebenzi ngabasebenzi basendlini noma abantu abaqashiwe, okungukuthi, abazisebenzayo. Noma ngabe kukhona ifayela le- ukungasebenzi kwabasebenza ngokuzimela, unemithetho ethile okufanele imbozwe ukuze ufinyelele kuyo futhi ibizwa ngokuthi "Isilinganiso sokumiswa komsebenzi".
Manje, sifuna ukucacisa iphuzu elibalulekile, izinsuku zomnikelo zisetshenziselwa kokubili ukuthatha umhlalaphansi kanye nezinzuzo, ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuzazi zombili, noma kunjalo, zingasetshenziswa ngokungafani. Lokho kusho ukuthi, ngenkathi izinsuku zinikelwa uma zisetshenziselwe ukukhokha noma uhlobo oluthile lwenzuzo, izinsuku ezinikelwe umhlalaphansi zibalwa ngeminyaka futhi lezi azichithwa, okungukuthi, ziyaqoqeka kuyo yonke impilo yakho.
Kuzo zombili lezi zimo, kubaluleke kakhulu ukwazi ukuthi iyini inani leminyaka oyenayo.
Ukubaluleka kombiko wempilo yomsebenzi
Abasebenzi abaningi banezabo ukusebenza impilo UMBIKO ukuze bazi izinsuku asebezicaphunile. Akungabazeki ukuthi le inketho engcono kakhulu naleyo esiyincome kuwe phezulu; Kodwa-ke, kufanele ube nayo yonke idatha ephepheni ukuze kuthi uma kukhona ukwehluleka kudatha yakho, ungafaka isicelo noma ushintshe noma yiluphi uhlobo lolwazi kumbiko wakho wokuphila emsebenzini. Yonke idatha oyithola lapha iyalinganiselwa futhi ezimweni eziningi, idatha kungenzeka ilahlekile noma amanani awahambisani no-100%.
Umbiko wokuqashwa kufanele uhlale uthathwa ngendlela ekhomba ngokuphelele ukuze umuntu ngamunye athole umbono olinganiselayo ongahambelani ngaso sonke isikhathi ne-100%, kepha ohlale esondele kakhulu kulokho esifuna ukukwazi.
Noma kunjalo, i- ukubalwa kwangempela kwezinsuku ezibalweKufanele njalo kwenziwe ngemisebenzi yomphakathi ngesicelo senzuzo noma uxhaso kanye nayo yonke imininingwane yangempela ephepheni ukuze ukwazi ukubala kwangempela ngesandla nganoma yisiphi isikhathi.
Ngifunde kanjani impilo yami yomsebenzi ukwazi izinsuku ezicashuniwe
Lapho usunempilo esebenzayo, udinga ukwazi ukuyihumusha kahle. Umbiko wokuphila osebenzayo uhlukaniswe izigaba eziningana lapho kutholakala khona imininingwane yomuntu ngamunye nenombolo yokuphepha komphakathi (qiniseka ukuthi ilungile). Ungahlola nokuthi yini i- inani lezinsuku ezicashuniwe endaweni lapho ithi "ibhaliswe ohlelweni lokuvikeleka komphakathi izinsuku" x ".
Ngezansi nje kwale datha, uzothola zonke izikhathi ozinikeze zona phezulu nangaphansi kwezokuphepha komphakathi, nosuku ngalunye kanye namagama ezinkampani.
Uma kwenzeka ubona ukuthi eminye imininingwane ilahlekile, ungacela ukuguqulwa kwayo, kepha kufanele ube namaphepha akhombisa ukuthi usebenze ngempela endaweni elahlekile ngokuthumela imibhalo eskeniwe, ukuze abezenhlalakahle bakwazi ukuyifaka.
Futhi, uyazi ukuthi kufanele unikele ngeminyaka emingaki ukuqoqa impesheni encane? Chofoza lapha:
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Umsebenzi » Ungazi kanjani izinsuku ezinikele ekuvikelekeni komphakathi?
UJose Vicente Pinilla kusho
Esikhathini esifushane esedlule ngizamile ukuthola ku-inthanethi iminyaka yami yeminikelo ku-SS (Work Life) ngeDigital Certificate yami futhi angiyitholanga futhi namhlanje encwadini yakho yokubhalela enhle nangokuchofoza ku-jiffy ku- "enter the platform" "Sengivele nginayo! Ngiyabonga kakhulu Susana.
Phendula uJosé Vicente Pinilla
UTOMAS FERNANDEZ CARRETERO kusho
SENGIQEDE IZINSUKU ezingaki
Phendula kuTOMAS FERNANDEZ CARRETERO
Felix Vasco Jimenez kusho
Ngifuna ukwazi ukuthi ngineminyaka emingaki ngibhalisiwe, igama lami ngingu-felix vasco jimenez 75669356t
Phendula u-felix vasco jimenez
ukuthengiswa kwe-magdalena segarra kusho
/ Ngibala kanjani futhi yimiphi imisebenzi okufanele ngiyenze ukubala izinsuku zami ezibalwe (amahora x 8 ahlukaniswe x ????) Kunjani ukusebenza? Ngiyabonga
Phendula ukuthengisa kwe-magdalena segarra
UMaria Eugenia Laba kusho
Sawubona, ngezinsuku eziyi-1055 zeminikelo, okungukuthi, iminyaka emi-2, izinyanga eziyi-10, nezinsuku ezingama-21, impesheni yami ingakanani?
Izingelosi zaseMari kusho
Ngingathanda ukwazi engikucaphune nokuthi yini engingayigcina njengoba ngineminyaka engu-58 ubudala futhi eminyakeni embalwa ngicaphune i-imeyili yami ukuphendula mangeles.marquez@dkvintegralia.org muchas Gracias
Phendula izingelosi zaseMari
Bopha amabhande akho esihlalo: ukungazinzi kubuyela ezimakethe